ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ အာဖရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံးကစားသမား ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB "ဟုအဆိုပါအမည်ဖြင့်တစ်ဦးနိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်Vic"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသင်သည်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။
အဆိုပါအသက်တာနှင့်ဗစ်တာ Osimhen ၏ထ။ Image ကို Credit: Vanguard, NigerianNewsDirect နှင့် Twitter
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပညာရေး / အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း buildup စောစောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသက်, ကျော်ကြားမှုမှလမ်း, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ, မိသားစုအချက်အလက်များ, လူနေမှုပုံစံစတဲ့သူ့ကိုအကြောင်းကိုအခြားအနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များမှထသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ / မိသားစုနောက်ခံပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်သိတယ် မျက်စိနှင့်အတူအလုံးစုံ-ပါရမီတိုက်စစ်မှူး လှပသောရည်မှန်းချက်များသွင်းယူသည်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောဗစ်တာ Osimhen ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
ချွတ်စတင်ခြင်း, သူ့အပြည့်အဝအမည်များကိုဗစ်တာယာကုပျက Osimhen ဖြစ်ကြသည်။ သူကမကြာခဏခေါ်တော်မူအဖြစ်ဗစ်တာ Osimhen ပုရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် မိမိအနှောင်းပိုင်းတွင်မိခင်နှင့်ဖခင်ဂို့, နိုင်ဂျီးရီးယား၏မြို့မှာရှိတဲ့အသက်ကြီးပက်ထရစ် Osimhen မှဒီဇင်ဘာလ 29 ၏ 1998th နေ့ဖြစ်၏။ သူကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံသည်သူ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိဘများမှမွေးဖွားကလေးခြောက်ယောက်၏နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗစ်တာ Osimhen Parents- သူ့ dad- အသက်ကြီး Partick & နှောင်းပိုင်းတွင်အမေ။ Image ကို Credit: NigerianNewsDirect နှင့် IG
ဗစ်တာရဲ့မိဘများနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အဲဒိုပြည်နယ်၏တိကျစွာ Esan အရှေ့တောင်ဒေသခံအစိုးရဧရိယာတောင်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားကနေသူတို့မိသားစုဇာစ်မြစ်ရှိသည်။ "ဖြစ်သည့်သူ့မိသားစုအမညျသOsimhen"နည်းလမ်း ''ဘုရားသခငျသညျကောငျး၏'' က Ishan စကား၌တည်၏။
တောင်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အများအပြားထင်ရှားတဲ့ဘောလုံးသမားကဲ့သို့ပင်ဗစ်တာ Osimhen ဆင်းရဲသားမိသားစုနောက်ခံကနေလာ၏။ သူမမွေးခင်, သူ့မိဘများ၏မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ "ဂို့"နိုင်ဂျီးရီးယား၏စီးပွားရေးမြို့တော်။ ဂို့မှာမိသားစုအခက်အခဲတွေ, ဒါကြောင့်နည်းနည်းဗစ်တာကိုက်ခဲ့သည့်တဦးတည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်တောင်မှစဉ်ထို့နောက်ကလေးငယ်သည်မိခင်သူမ၏ paltry ဝင်ငွေဖြည့်စွက်ဖို့အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုရေရောင်းဖို့အသုံးပြုဘယ်မှာဂို့အသွားအလာအတွက်လောင်သောနေရောင်ရင်ဆိုင်ရစေခဲ့သည်။
ဗစ်တာ Osimhen Olusosun တစ်ဦးကသူ၏အစ်ကိုအန္ဒြေနှင့်4သည်အခြားမောင်နှမအတူကြီးပြင်း Oregun, Ikeja, ဂို့န်းကျင်သေးငယ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်း။ ဒါကအသိုင်းအဝိုင်းအာဖရိကတွင်အကြီးဆုံး dumpsites ၏တဦးတည်းပြီးရှိကြတယ်။ မိမိအပုံနှစ်များတွင်ကြီးပြင်းဗစ်တာ Osimhen သည်သူ၏ပညာရေးနှင့်မိသားစုရပ်တည်ရေးများအတွက်ရန်ပုံငွေနိုင်ရန်အတွက်လမ်းမများပေါ်တွင်အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုရေနှင့်အခြားအိမ်ထောင်စုကုန်စည် hustled နှင့် hawked ။ (TheNationOnlineng အစီရင်ခံစာများ) ။
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
သူတက်ရောက်ခဲ့သည်ရာ Olusosun မူလတန်းကျောင်းရပ်ရွာထဲတွင်အားလုံးကျောင်းမှကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များအတွက်ဘောလုံးအစည်းအဝေးတွင်အမှတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Olusosun မူလတန်းကျောင်း - ဘောလုံးခရီးစတင်ခဲ့သည့်နေရာ။ Credit: LagosSchoolsOnline
ညဦးတိုင်း, ဗစ်တာအပါအဝင်ယောက်ျားလေးများအများကြီးရပ်ရွာထဲတွင်ဒေသခံတစ်ဦးဘောလုံးကြယ်ပွင့်သောမိမိအစ်ကိုဖြစ်သူကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဘောလုံးလယ်ပြင်သွားပါ။ အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီအင်ဒရူးဗစ်တာနှင့်သူ၏သည်အခြားမောင်နှမဂရုစိုက်ဖို့ Moni ဝင်ငွေနိုင်ရန်အတွက်မိမိအပညာရေးစွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏မွေးဖွားပထမ။
hawking လက်ထောက်, ဗစ်တာလညျးမိမိအစ်ကိုဖြစ်သူ, အန္ဒြေမှဘောလုံးကျေးဇူးတင်စကားကစားသင်ယူခဲ့တယ်။ သူကြည့်စင်တာများအတွက်အသင်းကစားစောင့်ကြည့်အဖြစ်သူလည်းချယ်လ်ဆီးအသင်းအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကအတူတူသူ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူနိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းကို (စူပါလင်းယုန်) ၏ကြီးမားသောပရိတ်သတ်များခဲ့ကြသည်။ အတူတကွအားကစားကစားသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူအသင်းများအတွက်ထောက်ခံမှုတဲ့ professional ဖြစ်လာဖို့အလိုဆန္ဒကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
မိမိအနည်းနည်းအစ်ကိုကပိုထူးချွန်ခဲ့တာကိုမြင်လျှင်, အင်ဒရူးကသူ့သတင်းစာလုပ်ငန်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဂိမ်းစွန့်ခွာခဲ့ရသည်။ သူကတစ်ဦးစူပါစတားဖြစ် evisaged သောမိမိနည်းနည်းအစ်ကိုကကူညီငွေမြှင့်နိုင်အောင်သူလည်းမိမိအပညာရေး furthering ၏စိတ်ကူးကွာပစ်ချ၏။
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
ဒေသခံဘောလုံးကင်းထောက်ဗစ်တာအကြောင်းကိုအထူးအရာတစ်ခုခုကိုသတိပြုမိထိုအခါသူပထမဦးဆုံးအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ခဲ့ဘယ်မှာဂို့အတွက် Ulitmate တိုက်စစ်မှူးအကယ်ဒမီမှသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သကဲ့သို့မိသားစုရဲ့အိပ်မက်ကိုချွတ်ဆပ်ဖို့စတင်မှီကအချိန်မယူခဲ့ပါတယ်။
ယခုနှစ် 2014 မှာတော့ Ultimate တိုက်စစ်မှူးနှင့်အတူဗစ်တာ Osimhen ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်သူ့ကို coac ဖိတ်ကြားတဲ့ကိုမြင်လျှင်ဇ Amuneke မိမိတိုင်းပြည်ဦး-17 အဖွဲ့ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။ မှတ်စု: ရွှေ Eaglets အဖြစ်လူသိများအဆိုပါနိုင်ဂျီးရီးယားအမျိုးသားရေးဦး-17 ဘောလုံးအသင်း, ဘောလုံးအတွက်နိုင်ဂျီးရီးယား၏နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုသောအငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗစ်တာ Osimhen အဖွဲ့များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီကူညီဆာခဲ့ ချီလီတွင်ကျင်းပခဲ့သည့်ဦး-17 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား။
အဆိုပါ 2015 ဖီဖာဦး-17 ပြိုင်ပွဲ: ဗစ်တာ သူသည်စကားလုံးန်းကျင်ဥရောပကင်းထောက်များ၏ရှိသူများအပါအဝင်နှလုံးသားများသန်းပေါင်းများစွာအနိုင်ရတဲ့, ဒီပွဲဦးထွက်ပေါ်ကွီးနှစျဂိုးသွင်းအဖြစ် Osimhen ပြိုင်ပွဲအတွက်အကောင်းတစ်ဦးက start ရှိခဲ့ပါတယ်။ Osimhen ချီလီအတွက်ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားမှာနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ U-17 အောင်မြင်မှုရဲ့အဓိကဖြစ်ခဲ့သည်။ ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရမိမိတိုင်းပြည်ကူညီပေးနေဘေးဖယ်, ထိုပါရမီနိုင်ဂျီးရီးယားလည်း 10 ရည်မှန်းချက်များနှင့်လည်းဖီဖာဦး-17 ကမ္ဘာ့ဖလားငွေ Ball ကိုသွင်းယူပြီးနောက်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဂိုးသွင်းဆုပါအိတ်စွပ်။
မိမိအဖီဖာဦး-17 ကမ္ဘာ့ဖလားရွှေ Boot ကိုများနှင့်ငွေ Ball ကိုအတူဗစ်တာ Osimhen posses ။ ခရက်ဒစ်: Jumia နှင့် Hundustantimes
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှလမ်း
ကမ္ဘာ့ဖလားပြီးနောက်ကဥရောပအနေဖြင့်ကြီးမားသောကလပ်အသင်းအာဆင်နယ်, က Man မြို့, တင်ဟမ်ဟော့စပါး၏အကြိုက်, သူ့န်ဆောင်မှုများအပြီးကြ၏။ ထင်ရှားခဲ့သည် အခြားအလယ်အလတ်အလေးချိန်ကလပ်သူ့ကိုအကြီးမားဆုံးပိုက်ဆံကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မိသောကြောင့်ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, ဗစ်တာ Osimhen အားလုံးကမ်းလှမ်းမှုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
သူကဇန်နဝါရီလ 2015 အတွက် Abuja အတွက်က CAF ဆုပေးပွဲမှာတစ်နှစ်တာ၏ 2016 အာဖရိကလူငယ်ကစားသမားအမည်ရှိအချိန်လေးပြီးနောက်, Osimhen သူဂျာမန်ဘွန်ဒစ်လီဂါကလပ်, Wolfsburg နဲ့သူ့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘလိုက်ရှာလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘာကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုအဆိုအရကလပ်ရဲ့အာမခံခကျြမြားပေါင်း Moni သူ့မိသားစုများအတွက်စိတ်ဓာတ်အာနိသင်တိုးမြှင့်ပိုသူမဟုတ်ဘဲဂျာမန်ကလပ်များအတွက်ဥရောပ၌မဆိုထိပ်တန်းကစားကြိုက်နှစ်သက်သည်တာပါပဲ။
ဂျာမနီမှာဝဒေနာ: Osimhen ဇွန်လ 2020 သည်အထိသုံး-and တစ်နှစ်ခွဲနှစ် Pre-စာချုပ်သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းနှင့်မေလ 2017 အတွက်ဂျာမန်ထိပ်တန်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်၌သူ၏ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ ပဲမိမိဘွန်ဒစ်လီဂါပွဲဦးထွက်အောင်၏လေးလအကြာ, ဒုက္ခနိုင်ဂျီးရီးယားများအတွက်ဒီထက်မကမှစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကပခုံးဒဏ်ရာသူ့ကိုသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရာသီမှတစ်ဦးအချိန်မတန်မီဆုံးကိုဆောင်ခဲ့သောခွဲစိတ်သို့သွားစေတော်မူ၏။ ထိုဆင်းရဲသောအဆင့်မှာပြီးသွား, ဗစ်တာ Osimhen (အောက်တွင်ပုံ) ထိပ်တန်းကလပ်အားဖြင့်ဒါ unmarketable ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူကဂျာမနီမှာဒဏ်ရာနှင့်အနာရောဂါနှင့်အတူရုန်းကန်အဖြစ်ဗစ်တာ Osimhen မျှော်လင့်ရှာဖွေနေ။ source တွစ်တာ။
Osimhen အိပ်မက်ဆိုးကိုသူ၏ပခုံးဒဏ်ရာကနေသူ့ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ဆက်လက်။ ဤအချိန်, ကသူ့ကိုနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ 2018 ကမ္ဘာကြီးခွက်ကိုရွေးချယ်မှုအပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံး, Pre-ရာသီလက်လွတ်ဆုံးနဲ့နာကျင်စွာအောင်, ကျော်လုယူသောအနာရောဂါဖြစ်ခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… သူသည်ရုရှား 2018 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား၏အချိန်မှာဆေးရုံ၌ရှိ၏။
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
ဒါဟာသူ့အိပ်မက်ဆိုးထဲကလာ2နာကျင်ရာသီအကြောင်းကို Osimhen ယူခဲ့ပါတယ်။ ကြောင့်ဒဏ်ရာများနှင့်အနာရောဂါမှမကိုက်ညီသည်သူ့ကိုအားဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖျက်ဆီး Wolfsburg မှာသုည (0) ရည်မှန်းချက်များသွင်းယူကိုမြင်တော်မူ၏။
အပေါ် Moving, Osimhen အဲဒီအခြိနျမှာနန်းသက်ချန်ပီယံဖြစ်နှင့်သောဘယ်လ်ဂျီယံကလပ် Zulte Waregem နှင့်ကလပ် Brugge နှင့်အတူနွေရာသီစမ်းသပ်မှုတွေတက်ရောက်ရန်သွားပါကသူ့စိတ်ကိုထစေ၏။ ထပ်, သူသည်မိမိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေထိခိုက်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုငြင်းပယ်ဖို့နှစ်ဦးစလုံးကလပ်အသင်းဖန်ဆင်းသောငှက်ဖျားဖျားနာဝပ်အဖြစ်သူ၏ကျန်းမာရေးရော့ခ်အောက်ခြေကိုနှိပ်ပါ။
22 တွင်သြဂုတ်လ 2018 ရက်စွဲပုခဲ့ ဘောလုံးဘုရား သူ့ကိုသနားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဘယ်လ်ဂျီယံကလပ် Charleroi တစ်ရာသီကြာအငှားစာချုပ်အပေါ်သူ့ကိုလက်ခံခဲ့သည်နေ့ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗစ်တာ Osimhen တစ် backheel အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်သူ၏ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်သွင်းယူ, 22 စက်တင်ဘာလအပေါ်သူ၏အပြည့်အဝပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ ဂိမ်းပြီးနောက် Osimhen ပြောသည် ဘီဘီစီအားကစား သူက "ခဲ့ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောချောင်းမြောင်းပြီးနောက်နောက်တဖန်မိမိအပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့"။
ဗစ်တာ Osimhen နောက်ဆုံးတော့ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောချောင်းမြောင်းပြီးသည့်နောက်သူ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်မှ ရည်မှန်းချက်
အဆိုပါလူနာနိုင်ဂျီးရီးယားချေးငွေအပေါ်နေချိန်မှာသူ့ကိုဆည်းပူးဖို့သူတို့ရဲ့ option ကိုသက်ဝင်, 36 ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် 20 ရည်မှန်းချက်များသွင်းယူသည်, မိမိကလပ်, Charleroi ကိုဖန်ဆင်းသောလုပ်ရပ်အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံဘက်နှင့်အတူအောင်မြင်သောစာလုံးပေါင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဘောလုံးလွှမ်းမိုးပြီးနောက်, နိုင်ဂျီးရီးယားပြန်သူတစ်ချိန်ကခဲ့သည့်ဦးဆောင်အာဖရိကတိုက်စစ်မှူးအဖြစ်သူ၏လမ်းကိုတက်ခွင့်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ခံစားရတယ်။ ဇူလိုင်လ 2019 ခုနှစ်တွင်သူသည်လိုင်လီ OSC များအတွက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အထက်သို့ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သည်။
ဗစ်တာ Osimhen Fame ပုံပြင်မှထလော့။ Image ကို Credit: ရည်မှန်းချက်
အဲဒီအစားပခုံးဒဏ်ရာနှင့်ငှက်ဖျားရောဂါနှင့်အတူပြိုလဲသွားပြီထက်, နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှူးဖြစ်လာမှထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့ဥက္ကာမြင့်တက်အမြဲတည်သော, တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကနေကြီးပြင်း ထပ်ဘောလုံးရဲ့အပူဆုံးဂုဏ်သတ္တိများအာဖရိကတဦး။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - relationship ဘဝ
ဥရောပ၌ကျော်ကြားမှုအားမိမိမြင့်တက်မှုနှင့်အတူကအများဆုံးပရိတ်သတ်တွေအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်ရှိမရှိဗစ်တာ Osimhen အပေါ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရာ၌ခန့်ထားပြီမယ်လို့အချို့ဖြစ်ပါသည်, ရည်းစားရှိပါတယ်။
ဗစ်တာ Osimhen Girlfriend ကားအဘယ်သူနည်း Image ကို Credit: IG
အဘယ်သူမျှမချော, သစ္စာရှိမှု, ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်နှိမျ့ခခြွငျးမြားအပါအဝငျ Osimhen ရဲ့နှစျလိုဖှယျအရည်အသွေးတွေကိုမင်းသမီးကသူပိုကောင်းတဲ့ရည်းစားစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်စေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းပယ်ရှိပါသည်။
နာမည်ကြီးလာပြီမီ, က Oshimen နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကောငျးခြီးအားဖြင့်ဝင်သူကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောမိန်းကလေးရက်စွဲပါကြောင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကာလအတွင်းနှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများမှန်မှန် Instagram ကိုပေါ်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဓါတ်ပုံတွေကိုဝေမျှ. သူသည်မိမိလူမှုမီဒီယာလက်ကိုင်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတဦးတည်းအနေဖြင့်သူမ၏၏ခြေရာတွေဖျက်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရှေ့တော်၌မိမိရည်းစားနှင့်အတူ Osimhen ရဲ့စွပ်စွဲချက်ကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်.2နှစ်ပေါင်းလူသိရှင်ကြားခဲ့သည်။
ဗစ်တာ Osimhen Girlfriend
သူမ၏သတင်းအချက်အလက်များသည်သူ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာထွက်သုတ်လိုက်ပြီးနောက်ကတည်းကကောလဟာလကောငျးခြီး Osimhen ရဲ့ရည်းစားသို့ရာတွင်သူ၏ betroded ဇနီးမဟုတျကွောငျးအခိုင်အမာသောတည်ဆဲထားရှိမည်။ မိမိအလူမှုမီဒီယာလက်ကိုင်မှတဆင့်စစ်ဆေးခြင်း, ကောငျးခြီးရန်သူ၏စွပ်စွဲချက်မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်မင်္ဂလာကိုမသတင်းအချက်အလက်ရှိနေပါသည်။ သို့သျောလညျး ဒါကြောင့်သူကမိန်းမအားလက်ထပ်ရအံ့သောငှါနေဆဲဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လူထုစေခြင်းငှါမကြိုက်နှစ်သက်သည်။
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, Osimhen တစ်ခုတည်းဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်ထက်ရည်းစားရှာနေသို့မဟုတ်အများပြည်သူသူ၏ဆကျဆံရေးအောင်အာရုံစူးစိုက်ရန်ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ကွာဘောလုံးကွင်းထဲကနေဗစ်တာ Osimhen ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသူ၏လူတစ်ဦး၏ပိုကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ၏စတင်ခြင်းသူထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဇွဲ၏စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးကသူ၏ Whatsapp ပရိုဖိုင်းကို pic ကိုအပေါ်အစဉ်အမြဲဖြစ်သည့်သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။
"ငါ Wolfsburg မှာငါ့အကာလအတွင်းငါ့ကိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သောအနုတ်လက္ခဏာမှတ်ချက်များနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအချို့ကိုအားဖြင့်မည်သည့်လမ်းအတွက်နှောင့်အယှက်မခံခဲ့ရ,"။ တနည်းကား, မိမိအဤစကားအားဖြင့်, သင်အလွယ်တကူသူတစ်ဦးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါသည်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
အပြင်ဘောလုံးကနေ Osimhen "သူ၏အကြိုက်ဆုံးနေဆဲကျန်ရှိသောနှင့်အတူခေတ်ပြိုင် R & B ဂီတကိုနားထောင်ခြင်းကိုချစ်သောသူငါပျံသန်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်"ဂီတကြယ်ပွင့်ခြင်းအားဖြင့်ထိခိုက်လမ်းကြောင်းသဲ R ကိုကယ်လီ။ တခါတရံမှာသူ့ရည်မှန်းချက်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပနေစဉ်အတွင်းသူ၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ကယ်လီရဲ့သီချင်းသီဆို။ ဒေသခံနိုင်ဂျီးရီးယားဂီတ၏ဧရိယာများတွင် Osimhen Olamide နှင့်အတူကပ်လျက်နှင့်နိုင်ဂျီးရီးယား hip-hop အနုပညာရှင်မှသူ၏အကြိုက်ဆုံးလမ်းကြောင်း 'ဖြစ်ပါတယ်'' ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာထိုင်။
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မိသားစုဘဝ
သူ့မိသားစုများ၏ breadwinner ဖြစ်ဖြစ်ပျက်တဲ့သူဗစ်တာ Osimhen, ဘောလုံးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ရေးဆီသို့သူ့မိသားစုရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုအတုရှိသည်ဟုဝမျးသာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအမှောငျမိုကျအချိန်လေးအတွင်းမှာသူ့ကိုအနား၌ရပ်နေသောသူအပေါင်းတို့သည်မိသားစုဝင်များ (အောက်တွင်ရှုလေ့လာကဲ့သို့) လက်ရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးဆောင်တတ်၏သောအပြည့်အဝ devidents ခံစားနေကြသည်။
ဗစ်တာ Osimhen မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များက။ NigerianNewsDirect မှအကြွေး
ဗစ်တာ Osimhen ရဲ့ခမညျးတျောအကွောငျး: pa ပက်ထရစ် Osimhen ဝါးနျြမိဘနှင့်ဗစ်တာ Osimhen ၏ဇီဝဗေဒအဘဖြစ်၏။ သူ Noga အားကစားစီမံခန့်ခွဲမှု၏ပြင်သစ်အေးဂျင့်ဖြစ်သူ Oliver နောဧအားစီမံခန့်ခွဲမှု၏တာဝန်လွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာသူက 2015 သည်အထိတစ်ချိန်ကမိမိသားမန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗစ်တာ Osimhen ရဲ့ဖေဖေ (ဒုတိယပိုင်ခွင့်ထဲကနေ), မိမိသားများနှင့် Noga အားကစားစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က။ ခရက်ဒစ်မှ AllNigeriaSoccer
ပက်ထရစ် Osimhen ကသူ့သား၏ဥပဒေရေးရာအုပ်ထိန်းသူဖြစ်ခဲ့သည်သောအခါသူ Wolfsburg ကသူ့သားရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကနေ Moni ဝင်ငွေမှတစ်ဦးလေလံအတွက်သူ့ကိုရှောင်ကွင်းဖို့ကြိုးစားနေသည်အခြားအေးဂျင့်များနှင့်အတူပြဿနာများကိုသို့ပွေးလေ၏။ သူ့ကိုရှောင်ကွင်းဖို့ကြိုးစားနေစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤအစု, ဗစ်တာ Osimhen များအတွက်စာချုပ်ညှိနှိုင်းမှုကျော်သူ၏ပထမဦးဆုံးသား, အန္ဒြေ Osimhen နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
ဗစ်တာ Osimhen ရဲ့မိခင်အကြောင်း: အစီရင်ခံစာများအရ, ကဗစ်တာ Osimhen ၏မိခင်နှောင်းပုံပေါ်ပါတယ်။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှူးသည်သူ၏ instagram အကောင့်မှာမိမိပရိုဖိုင်းပုံရိပ်အဖြစ်သူမ၏ဓာတ်ပုံကိုရှိခြင်းအားဖြင့်မိမိအမိအားချီးမြှောက်။
ဗစ်တာ Osimhen ရဲ့မိခင်။ Instagram ကိုမှအကြွေး
ဗစ်တာ Osimhnen မောင်နှမ: ဗစ်တာစုစုပေါင်းခြောက်ယောက်မောင်နှမရှိပြီးအင်ဒရူး Osimhen သည်သူ၏မောင်နှမများ၏အသီးအသီးထက်ပိုမိုရေပန်းစားသည်။ သူ့နှမများအတွက်ဗစ်တာ Osimhen ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှဘောငျရှိသည်။ မင်းသိလား?… သူမကပဲသူနိုဝင်ဘာလ 2015 ပတ်လည်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်အချိန်တွင်ကလေးကမိန်းကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်သူဟာတစ်ချိန်ကသူ၏နှမတဦးအားမိမိရွှေ Boot ကိုဆုချီးမြှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံ။
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအမျှဗစ်တာ Osimhen စျေးကွက်တန်ဖိုး 13,00 Mil အထက်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ €အဆိုအရ လွှဲပြောင်း Market က။ မိမိအလူမှုမီဒီယာလက်ကိုင်မှတဆင့်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်းလုပ်အားခ၌ဤ Moni အထင်ကြီးကားများ, အိမ်တော်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံ, မိန်းကလေးတစ်ဦး handfull အားဖြင့်အလွယ်တကူအသိပေးစာတစ်ခုအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလူနေမှုပုံစံစတဲ့စ tranform ပွု။
ဗစ်တာ Osimhen ရိုးရှင်းသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့နေထိုင်ပါတယ်။ Instagram ကိုမှအကြွေး
မိမိအကြမ်းတမ်းကြီးပြင်းနှင့်ဆင်းရဲသောမိသားစုနောက်ခံကနေပြန်ကြည့်ပါက Osimhen ကောင်းစွာ grounded ရပါမည်နှင့်သူ၏ Moni စီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိသင့်ကြောင်းအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မရေမတွက်အချက်အလက်
မိသားစုအငြင်းပွားမှု: ဗစ်တာ Osimhen ၏အနာဂတ်တစ်ကြိမ်သည်သူ၏အပြောင်းအရွှေ့အပေါ်တစ်မိသားစုအကျပ်အတည်းအောက်ပါရှုပ်ထွေးမှုများသို့လှဲချခဲ့သည်။ သူ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များကစားသမားကိုယ်စားပြုသင့်တယ်သူကိုကျော်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။
အွန်လိုင်းအစီရင်ခံစာများအဆိုအရ Osimhen ၏ဘထွေး, မိုက်ကယ်, တစ်ချိန်ကအင်ဒရူး, အခြားအုပ်စုသည်မိမိအကြီးအကဲတစ်ဦး arrowhead စဉ်အေးဂျင့်တစ်ဦးအဖွဲ့ခွဲဦးဆောင်လမ်းပြ။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများလွှဲပြောင်း Moni နှင့် player ကိုကိုယ်စားပြုဖို့အတွက်စစ်မှန်အခွင့်အရေးများကိုကျော်စစ်တိုက်ကြ၏သူတို့အေးဂျင့်ခဲ့ရသည်။ အစီရင်ခံစာများလည်း Osimhen ရဲ့အဖေ Wolfsburg ရန်ကစားသမားရဲ့အပြောင်းအရွေ့ထောက်ခံအားမိမိငြင်းဆန်ကျော်လူရမ်းကားများကရိုက်နှက်ခဲ့ကွောငျးမီဒီယာများတွင်ပေါ်ထွက်လာသည့်အခါမိသားစုအကျပ်အတည်းသစ်တစ်ခုအတိုင်းအတာတယ်။ ဒါဟာနောက်ပိုင်းမှာမှားယွင်းသောဖြစ်ဖယ်ရှား-bunked ခဲ့သည်။ မိသားစုအကျပ်အတည်းအဆုံးသတ်မှီကတစ်ချိန်ချိန်မှာယူခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Lucky ပျိုးခင်းနိုင်ဂျီးရီးယားကလပ်: ဇန်နဝါရီလ 1, 2017 တွင်, ဗစ်တာ Osimhen $ များအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်3,970,225 ဂျာမန်ကလပ် VfL Wolfsburg မှ Ultimate တိုက်စစ်မှူးအကယ်ဒမီ, ဂို့အတွက်ဒေသခံတစ်ဦးကလပ်ကနေ။
မင်းသိလား?… အဆိုပါအပြောင်းအရွှေ့ကြေးသူ့ကိုထိပ်တန်းဥရောပအဖွဲ့အာဖရိကအတွက်ပျိုးခင်းအသင်းထံမှတိုက်ရိုက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခံရဖို့စျေးအကြီးဆုံးကစားသမားတဦးတည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအတိုင်းဤလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုတွက်ချက်, Ultimate တိုက်စစ်မှူးအကယ်ဒမီဗစ်တာ Osimhen လွှဲပြောင်းထံမှ 1.4 ဘီလီယံခန့် Naira တစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါပေါင်းလဒ်ရရှိခဲ့သည်။
သူကဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်လွန်ကဲအဘယ်ကြောင့်: နိုင်ဂျီးရီးယားစာရေးဒီလိဂ်နိုင်ဂျီးရီးယားနှစ်ပေါင်းများစွာဘောလုံးသမားများနှင့်ဗစ်တာ Osimhen သည်သူ၏ဥရောပဘောလုံးအောင်မြင်မှုပေးသောတဦးတည်းတစ်မက္ကာခဲ့သည့်ဘယ်လ်ဂျီယံပထမတန်းအေမှာသူတို့ရဲ့ဥရောပအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ရန်လိုလားကြပါတယ်။
မင်းသိလား?… အမှန်တကယ်နှောင်းပိုင်း 1980s အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံတက်ဖြည့်ရန်နိုင်ဂျီးရီးယားအခွက်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဦးဆောင်ကြောင်းနိုင်ဂျီးရီးယားဟောင်းတဦးစူပါရွှေလင်းတနည်းပြနှောင်းပိုင်းတွင်စတီဖင် Keshi ။ ဒံယလေသ Amokachi, ဗစ်တာ Ikpeba, တနင်္ဂနွေ Oliseh နှင့်အလွိုင်း Agu များ၏အကြိုက်အားလုံးဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက်: ဘယ်လ်ဂျီယံ Celestine Babayaro အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံလိဂ်မှာအကောင်းဆုံးအာဖရိကကစားသမားသည်မိမိ Ebony ဖိနပ်ဆုအနိုင်ရမှာခဲ့ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗစ်တာ Osimhen ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
Taribo အနောက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Wilfred Ndidi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Odion Ighalo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဂျေး-ဂျေး Okocha ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Nwankwo Kanu ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အဲလက်စ် Iwobi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Kelechi Iheanacho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Ahmed က Musa ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဗစ်တာမောရှေသည်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Mikel Obi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇွန်လ 29, 2020